हेलिकप्टर बूक गरेर सोनिकासँग पारसले यस्तो गरेपछि, हिमानी डि’भोर्सको तयारीमा !(भिडियो) - Nepal Insider
Home/भिडियो/हेलिकप्टर बूक गरेर सोनिकासँग पारसले यस्तो गरेपछि, हिमानी डि’भोर्सको तयारीमा !(भिडियो)
हेलिकप्टर बूक गरेर सोनिकासँग पारसले यस्तो गरेपछि, हिमानी डि’भोर्सको तयारीमा !(भिडियो)
पोखरा २२ कार्तिक- पूर्वयुवराज पारस हेलिकप्टर चढेर अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पुगेका छन् । उनी मोडल तथा भिजे सोनिया रोकायासँग बेसक्याम्प पुगेका हुन् । पारससँग नाम जोडिएकी सोनिकाले भिडियो ब्लग युट्युबमा शेयर गरेकी छिन् ।
अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पुगेर पारस त्यहाँको प्रकृतिसँग रमाएका थिए । बेसक्याम्पमा पारससँग नाम जोडिएकी मोडल तथा भिजे सोनिका रोकाया पनि पुगेकी थिइन् । अन्नपूर्ण बेसक्याम्पपछि पारस मुस्ताङ पुगेका छन् । उनी आफ्ना सहकर्मी र साथीसँग मुस्ताङ पुगेका हुन् ।
उनी म्याग्दी हुँदै बुधवार दिउँसो मुस्ताङ पुगेको बताइएको छ ।हेलिकप्टर चढेर अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पुगेका पारस मुस्ताङ जाँदा २ वटा पजेरो जिप र ६ वटा मोटरसाइकलमा गएका थिए । भ्रमणमा रहेका पूर्वयुवराज पारसले तस्वीर खिच्न चाहनेसँग तस्वीर खिचाइरहेका छन् ।
पारश शाहले बा १४ च २१३१ नम्बरको गाडी चढेका छन् । यता सोनिकासँग पारस नजिक भएपछि पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहले डिभोर्स दिने तयारी गरेकी छिन् । निर्मल निवास स्रोतले हिमानी डिभोर्स दिन लागेको दाबी गर्‍यो ।
‘प्रेम गीत ३’मा प्रदीप खड्काको यस्तो अवतार, छायांकनअगावै सार्वजनिक गरियो मोसन टिजर
दशैमा ‘आउन पाइन घर’ :- शान्ती श्री परियार
छविलाई डिभोर्स दिन तम्तयार भएकै बेला शिल्पाले जन्माईन् बच्चा ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
भाइरल बनेकि रविना बादीले फेसबुकबाट यसरी रुदै लाइभ दिदै गरिन देहत्यागको कुरा, सत्यता के हो ? (भिडियो)